बियरका बोतल र चिर्पटले यसरी आक्रमण भयो मिनेन्द्र रिजालमाथि – ईमेची डटकम
नेपाली कांग्रेसका नेता डा. मिनेन्द्र रिजालमाथि तनहुँको रिसिङ गाउँपालिकामा सत्तारुढ नेकपाका कार्यकर्ताले आ’क्रमण प्रयास गरेका छन् । गाउँपालिका भवन शिलान्यास गर्न जाने क्रममा सडकमा अवरोध गर्दै आ’क्रमण प्रयास गरिएको थियो । नेता रिजाललाई तीनघण्टा बाटो छेकेर अघि बढ्न दिइएको थिएन । नेता रिजालले सत्तारुढ दल नेकपाका कार्यकर्ताहरुले प्रशासनको आडमा आफूमाथि आ’क्रमण प्रयास भएको बताएका छन् । प्रस्तुत छ, डा. रिजालमाथि तनहुँमा भएको आ’क्रमण प्रयासका बारेमा उनीसँग बाह्रखरीका जगन्नाथ दुलालले गरेको संक्षिप्त कुराकानीः
तीनघण्टासम्म त्यहाँ उनीहरुले बियरको बोतल र ढुँगा हानिरहे । हामी पनि पछि हटेनौं, उभिइरह्यौं । त्यहीबीचमा हाम्रा अरु साथीहरु पनि आइपुग्नुभयो । ४–५ ठाउँमा रुख ढालेर, बाटोमा ढुंगा राखेर अवरोध सिर्जना गरेका थिए । हतियार, ढुंगा, लाठीसहित आक्रमण गरे । साथीहरुले जोगाउनुभयो, बचियो । त्यो गाउँपालिकामा शतप्रतिशत कांग्रेसले चुनाव जितेको हो । हाम्रा अरु साथीहरुले हामीमाथि आ’क्रमण भएको थाहा पाएर आइपुग्नुभयो । त्यसपछि उनीहरुको केही नलाग्ने भएपछि तितरवितर भए । अनि हामी अघि बढ्यौं । भवन शिलान्यास कार्यक्रम सकेर फर्कियौं ।
प्रहरी प्रशासनको आडमा उनीहरु आ’क्रमणमा उत्रिएका हुन् भन्ने मलाई लागेको छ । किनकि त्यहाँ पुलिस प्रशासनले नै सत्तारुढ दलका कार्यकर्तालाई आड दिइरहेको हामीले पायौं ।
तपाईंमाथि के कारणले आ’क्रमण प्रयास गरिएको रहेछ ?
संविधान र लोकतन्त्रमाथि कसैबाट खतरा छ भने यही सरकारबाट छ । सरकार काम गर्न नसकेर आत्तिएको छ । अत्तालिएको छ । हतास मनस्थितिबाट विपक्षीमाथि आ’क्रमण गरिएको छ ।
भनेपछि अब कांग्रेस आफुमाथि आ’क्रमण भए त्यसका विरुद्ध उत्रिन्छ ?